Navoaka ny fitsapana ny chakra ISO Netinstall | Avy amin'ny Linux
Navoaka ho fitsapana ny Chakra ISO Netinstall
Rayonant | | Fitsinjarana, GNU / Linux, About us
Ny fampandrosoana ny Chakra tsy mijanona ary tsy mijanona koa Tribe, ny installeranao. Aorian'ny asa lehibe dia miomana ny zava-drehetra amin'ny famoahana ny ISO «Benz»Ho fanomezam-boninahitra ny injeniera alemanina izay nisy KDE 4.10 SC, ankehitriny nisy zavatra vita izay nangatahina efa ela, androany ISO dia navoaka mba hanao chakra netinstall, izay hitako tamin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialy .
Na izany aza, satria fiovana lehibe eo amin'ny sehatry ny fametrahana izany ary na dia nanao ny fitsapana azy manokana aza ny mpamorona, dia angatahina fanampiana daholo ny tsirairay mba hahitana lesoka mety hitranga amin'ny ISO vaovao, noho izany ny fampiasana azy dia tsy tokony hasaina ho an'ny ekipa mpamokatra. Soso-kevitra ihany koa ny hanaraka ny tolo-kevitry ny Wiki ho an'ny fitsapana.
Misy fomba roa hampiasana ny netinstall, amin'ny alàlan'ny haino aman-jery fametrahana vaovao eto:
Na azo atao amin'ny ISO «Benz«, Fa mametraka ny farany Tribe amin'ny maody mivantana toy izao:
tsikelikely Chakra Manamafy ny toerany izy, tsy amin'ny fampitoviana ny toetra mampiavaka azy ihany, fa amin'ny alàlan'ny fanomezana fitaovana vaovao toa ny zava-nitranga niaraka tamin'ny fitaovana hanamboarana ny rindranasa GTK ampiasaina amin'ny Chakra izay ampahan'ny KDE 4.10.
Tsy misy isalasalana fa ho avy mamirapiratra no jerena amin'ity fizarana ity, izay handray dingana lehibe rehefa havoaka amin'ny farany. Akabei ary afaka lasa mahaleo tena tanteraka pacman (na dia tsy zahana intsony aza ny kinova Arch satria misy fahasamihafana lehibe).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Navoaka ho fitsapana ny Chakra ISO Netinstall
Distro lehibe izany, efa an-taonako no nahazoako azy, ary ny marina dia mahazo aina tsara aho amin'izany, hany ka mpampiasa Gtk aho ary izao dia ao anaty kde tena mahazo aina aho.
Vaovao tsara na dia tsy mieritreritra ny hampiasako azy aza aho satria tsy mikasa ny hanova ny chakra xD
Fitsipika Chakra !!! Izaho dia niaraka tamin'ny Chakra efa ho roa taona izao, ary nihatsara isan'andro. ny fanavaozana farany, notarihin'i Dharma sy Kaledonia, dia mijery sy miasa tsara. Tamin'ny voalohany, ny olana momba ny tsy fisian'ny fampiharana GTK sy Gnome dia toa fatiantoka lehibe ho ahy, saingy navela izany, noho ireo bundles. Ankoatr'izay, tsy azoko an-tsaina ny mifindra any amin'ny tontolo hafa: toa tsy azo soloina i Amarok.
Izaho dia niaraka tamin'i Chakra nandritra ny herintaona ary manamafy aho fa hihatsara hatrany ary tiako ny amarok fa nosoloiko clementine efa ela be 😀
Tsy afaka nahazatra an'i Clementine aho, fa tsy noho izy mpilalao ratsy.
Mampihomehy, mifanohitra amin'izay ny zava-mitranga amiko, tsy afaka nifankazatra tamin'i Amarok mihitsy aho. koa mampiasa Clementine amin'ny Xubuntu sy Chakra aho.
Marina izany, mpankafy an'i Amarok aho (na taloha) saingy vao nosoloiko an'i Clementine izy; Amarok dia manaraka ny fihenan'ny fahazotoan'ny devs-ny izay misy ifandraisany amin'ny endri-javatra tsy misy dikany na adala - jereo ireo forum - miampy ny toa namboarina mba hadio _ ho an'ireo mpampiasa vaovao.
Clementine kosa toa mpilalao namboarin'ny vondron'olona mpijirika KDE ho an'ny vondrom-piarahamonina mpijirika KDE, manana safidy tsara dia tsara izy, maivana sy haingana kokoa noho i Amarok ary tena mandeha tsara izany!
Tsara kokoa isan'andro sy manana fitaovana manokana.
Tena tsara ho an'ny Chakra
Toa fizarana tena tsara ho ahy izany, (efa nanandrana aho rehefa nisy ny 32 ary vao tsy ela ny 64) ny tsy manamboatra ahy dia ny olan'ny fampiharana ao amin'ny GTK izay voavaha (ny maro an'isa) miaraka amina bundles; fa misy kosa ny rindranasa hafa izay tsy ao anaty trano fitahirizana ary raha ny an'ny Kubuntu, Mint ary Netrunner raha hita izy ireo ary etsy ankilany dia tsy nahita boky torolàlana tsara amin'ny teny espaniola izay mampianatra ahy hampiasa ny terminal sy ny baiko ao aminy, satria izaho dia ka "apt-get ... sns ..." no nahazatra ahy ka sarotra amiko ny mahatakatra pacman.
Izaho manokana dia te hampiasa azy io amin'ny solosaina finday Samsung RV408 FreeDOS, fa ireo zavatra kely nolazaiko ireo (fitaovana samsung; freefilesync; Ary ny mpitantana PPA; Seamonkey) dia tsy namela ahy hanala an'i Kubuntu 12.10, raha misy manampy ahy ... ho mpampiasa Chakra hafa aho .
Manazava aho fa tsy manangona, ny fahalalako amin'ny Linux dia azoko an-tserasera ary ny asako dia fanafody; Fa ny Linux no fialam-boliko ary ireo programa ara-pitsaboana izay nampiasaiko tamin'ny Windows dia efa noraisiko ho Linux izy ireo ary ireo izay tsy nataoko, satria amin'ny VirtualBox dia ampiasaiko izy ireo mandra-pahitako fomba ahazoana azy ireo ho an'ny Linux.
aloka dia hoy izy:
Ghermain, raha tena te-hitsapa ny Chakra ianao dia azoko lazaina aminao fa, amin'ireo programa nolazainao, ireo fitaovana samsung sy freefilesync dia ao amin'ny fitoeram-bolan'ny CCR, raha Seamonkey kosa ao AUR ary azonao atao ny manandrana mandefa rehefa manamboatra ny fikorontanan'ny hack (CCR izao ny tenany tsy mamela ny manampy fonosana vaovao). Ary ny PPA Manager dia tsy natao ho an'ny Arch akory, fa programa manokana ho an'ny distros izay mampiasa PPA toa ny Ubuntu sy ny derivatives-ny.
Momba ny fampiasana pacman, mino tanteraka aho fa tsy misy boky torolàlana tsara kokoa noho ilay ao amin'ny Arch wiki:
Na izany na tsy izany, araka ny efa niresahantsika imbetsaka tao amin'ny bilaogy, tsy ny diso rehetra dia ho an'ny mpampiasa rehetra na ho an'ny ekipa rehetra. Raharaha manandrana sy misafidy izany. Midika izany fa raha mila fitaovana sasany ianao ary mametraka azy ireo ao Chakra dia mila manasarotra be ny fiainanao ianao, satria tsy misy dikany ny fampiasana an'ity distro ity amin'ny safidy tsara be dia be, araka ny fantatrao. Mihobia!
Hiandry roa volana aho fa mila mandeha any ivelany ary any (izay mora vidy kokoa ho ahy) dia mividy HD manana fahaiza-manao lehibe kokoa noho ny ananako ankehitriny ary avelako ny fizarana izay ampiasako ho voalohany (Kubuntu 12.10) ary Mametraka ho Chakra faharoa hanandramana aho ary raha mahay mihavana aminy aho dia avelako izy ho lehibe indrindra, ary misaotra ny rohy pacman, handinika azy aho.
Ny foko dia fampijaliana, raha ny marina, ny mpanamboatra sary ratsy indrindra ho an'ny GNU + Linux.
Mialà amin'ny Ubiquity, ny installer Ubuntu, mahafinaritra fotsiny izany: nampiasa solosaina hatramin'ny vanim-potoana 8-bit aho ary ny installer Ubuntu no mpametraka voalohany ho an'ny rafitra fiasa izay tonga lafatra.
Tsy dia ratsy loatra izany amiko, toa takatry ny saina sy azo ampiasaina izany, nefa mazava ho azy fa maro ny zavatra azo hatsaraina toy ny fanampiana LVM sy ny hafa.
Jereo fa ami no tiako indrindra ary izy irery no tsy nanome ahy olana 🙂
Izay vaaaaa, tsara be ny Foko, ny fizarana fizarana ihany no tsy ananany, fa ho an'ny ambiny, hitako fa tena mora sy takatry ny saina izany.
Pandev dia mampiasa ny KDE Partition Manager 🙂
Noho io antony io dia tsy manana azy io, mampiasa programa ivelany izy io, izay, raha ny marina, dia tena ratsy tokoa.
set92 dia hoy izy:
Eny, miarahaba anao amin-kitsim-po amin'izay rehetra mampiasa chakra aho, fa izay rehetra ataon'ny chakra dia toa hevitra tsy dia tsara loatra, tsy tsapako izany raha tsy nilaza ny hevitry ny mpamorona compix, ireo izay mampiasa linux ary mihevitra azy ho iray amin'ireo tombony azony fanaparitahana nefa tsy tsara kokoa ve ny miasa amin'ny zavatra iray ihany ary manipy zavatra iray miaraka amin'ny fotoana iray fa tsy zavatra 20 mitovy? Ireo izay manao ireo vaovao ireo momba ny Chakra sy ny fanovana rehetra ho an'ny KDE, maninona no tsy ataon'izy ireo ny fonosana ary apetrany ao amin'ny AUR? Toy izany koa, betsaka kokoa ny olona hiara-miasa, betsaka ny olona afaka manandrana azy ... sns, sns. Tiako ohatra ny mitafy Dharma fa tsy haiko raha ho hitako amin'ny alàlan'ny AUR izany na tsy tezitra aho, mieritreritra aho fa hisy izany satria nisy nanala azy avy tany Chakra ary ho nitondra Arch izy ary amin'ny farany dia misy toerana 2 tokony hiasa sy hikolokoloana azy ... Mihevitra aho fa tokony ho teboka iray hafa hanatsarana ny Linux io.
Valiny amin'ny set92
1er WTF ve i Dharma?
Faha-2 Raha tokony "hanelingelina" anao sy manipy tovovavy kely misavoritaka aho dia nankasitraka izay anananao ary hanadihady ny fomba fitaterana ilay Dharma mahatsikaiky ianao - na inona izany na inona - amin'ny lampihazo / fizarana ampiasainao ary ahafahan'ny mpampiasa hafa miditra mora foana, tahaka ny ataony Mpampiasa hafa miaraka amin'ny rindrambaiko izay azonao namboarina ary vonona ny hanome hasina anao.
Tsy manana hevitra mampihomehy izay lazainy ianao, nanandrana nampiasa Windows 95 ve ianao?
Dharma dia zavakanto Chakra vaovao izay misy ny kinova vaovao any Caledonia (ny lohahevitra plasma) ary ny lohahevitra ho an'ny KDM sy Ksplash miaraka amina loko miloko.
Raha tena tian'izy ireo i Dharma dia azon'izy ireo atao ny mametraka ny anaranao rehetra avy amin'ny trano fitahirizana na avy amin'ny KDE-Look.org.
Tsy raharaha lehibe io.
tsy afaka izy ireo. Tsy azo apetraka ao amin'ny KDE Look i Dharma. Nilaza ny mpanoratra fa noforoniny manokana ho an'ny Chakra izy io ary miaraka amin'i Chakra ihany no misy azy.
Sarotra ihany izany toy ny fametrahana Chakra (ohatra amin'ny MV) ary ny 'fanesorana' ireo faritra mahaliana antsika.
Rehefa dinihina tokoa, ny GNU + Linux no Frankenstein an'ny rafitra miasa, sa tsia!?
Andao hidina amin'ny ampahany, ny adihevitra momba ny fanaparitahana dia efa im-arivo no nanehoana hevitra, ary mihoatra ny antony marim-pototra: satria mampiroborobo ny fifaninanana (ary noho izany dia miteraka fanatsarana), satria mamela ny safidy isan-karazany sns, ny fihenan-danja lehibe ( raha azo antsoina hoe izany, satria raha ny tena izy dia tsy zavatra ratsy izany) dia ny tsy ahafahanao manery olona manao an'io amin'ny sitrapony ary satria hitan'izy ireo fa mahaliana ny miasa amin'ny zavatra tsy tadiaviny, tsotra.
Raha ny fanajana, ny AUR dia tahirin-kevitr'ireo mpampiasa ary voafetra izany, na dia mino aza aho fa ny mpampiasa sasany dia efa nampakatra an'io karazan-javatra io teo) fa ny zavatra rehetra hivelaran'ny tetikasa rindrambaiko distro na rindrambaiko maimaimpoana dia azonao atao ny misintona ny kaody loharano ary manangona izany ny tenanao, amin'ny fomba mitovy amin'i Dharma, i Malcer dia manome fahazoan-dàlana ny asany miaraka amin'ny CC ary samy caledonia ary ny lohahevitra ho an'ny grub, ny lohahevitra KDM sy ny Ksplash dia azo alaina sy apetraka. Ary farany mampahatsiahy anao fa na dia nipoitra tao amin'ny Arch aza ny Chakra, dia fizarana roa tena hafa izy ireo ankehitriny, noho izany dia tsy misy ifandraisany ireo tranonkala roa tazomina.
Ary lazaiko aminareo fa tsy tian'ny Malcer (mpamorona an'i Dharma) hanavao ny asany, noho izany dia napetrany teo ambanin'ny fahazoan-dàlana Lisansa Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 mamela hamoaka izany, satria hoy izy:
Malalaka ianao amin'ny:
- Mizarà: handika, hizara ary hampita ampahibemaso ny sanganasa.
- Ampiasao ara-barotra ny asa
Amin'ireto fepetra manaraka ireto:
- Fankasitrahana: Tsy maintsy ekenao ny mari-pankasitrahana amin'ilay asa araka ny fomba namboarin'ny mpanoratra na ny nanome fahazoan-dàlana anao (fa tsy amin'ny fomba milaza fa manana ny fanohanan'izy ireo ianao na manohana ny fampiasana ny asa).
- Tsy misy asa azo avy amin'ny derivative - Ity asa ity dia tsy azo ovaina, ovaina na hitarina.
Araka ny nolazain'ny namana espaniola iray: kitiho ny atodinao .. Voalohany indrindra, tsy fantatro ny fomba anaovana asa iray ho an'ny tontolo Desktop malalaka, ary mihazakazaka amin'ny GNU / Linux Distribution manana fahazoan-dàlana toy izany. Na izany aza, tokony hanaja ny asan'ny hafa ianao ..
Tsy misy fomba hahazoana Dharma raha tsy mampiasa Chakra ianao, na dia toy ny mahazatra aza, dia tsy misy zavatra tsy azo tanterahina eto amin'ity fiainana ity. Ny nataoko dia ny fitadiavana ireo fonosana ao amin'ny fitoeram-bokin'i Chakra, ampidino izy ireo, esory izy ireo ary apetraho amin'ny toerana misy azy avy. Raha liana amin'ny fampidinana azy ianao:
Toa tsy ratsy amiko ny Chakra, distro ny miloka amin'ny KDE, matotra fa tsy amin'ny fikapohana an'i Kubuntu, Netrunner, fedora miaraka amin'ny KDE na X distro miaraka amin'ny KDE, afa-tsy i Gentoo, aorian'ny fampiasana ny hafa rehetra gtk sy qt, Chakra no manana mampiavaka fa ny fonosana rehetra dia voaangona tsy misy fanohanan'ny gtk sy gnome, dia maivana kokoa izany raha ampitahaina amin'ny disto hafa ary tsy manelingelina ny rafitra amin'ny fiankinan-doha gtk, lozika fa manana CCR izy ireo satria ao AUR ireo zavatra misy dia tsy mifehy izany ireo fonosana mampakatra dia tsy misy gtk na gnome satria tsy voafatotra amin'ny tontolon'ny birao i Arch, ka tsy hitako ratsy izay ataon'ny chakra, mahatratra zavatra tena mahaliana izy ireo toa ny networkmanager sy ny libreoffice nanala azy ireo ny fiankinan-doha gtk rehetra .. dia izao izy ireo izao dia manandrana manome mafy ny «system-printer-config» hialana amin'ny fiankinan-doha gtk
Joe-Terr dia hoy izy:
Fantatrao ve ny fanovana ny chakra na ny fametrahana aorian'ny fametrahana azy? Vao haingana aho no nanomboka nandramana an'ity distro ity ary hitako fa tena ilaina ny wiki azy, saingy tena vaovao amin'ny fizarana KDE aho.
P.S. Nahita an'ity toerana mahafinaritra ity aho zavatra toa ny nanontaniako, tao amin'ny fidirana Perseus, izay volana maro lasa izay, heveriko fa mbola misy izy io ankehitriny, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Joe-Terr
Amin'ny ankapobeny dia hiteny aho fa efa betsaka ny zava-nitranga tao ambanin'ny ony, ohatra: ny fonosana ilaina amin'ny chakra dia efa ela tsy nijanona intsony, ny ccr izao dia tonga amin'ny alàlan'ny default, kaopy sy ny fanontana printy (ao anatin'izany ny hplip) koa, tsy dia misy zavatra maro mila manamboatra amina fametrahana chakra madio ianao raha tsy hoe angamba ny fikirana endri-tsoratra.
Efa te-hahita ny tompon'andraikitra fonosana aho, satria mbola mila manangona na mampiasa fonosana andohalambo ao Chakra toy ny ubuntuone
Noho ny olana tamin'ny asako dia voatery niverina tany amin'ny Windows aho satria tsy nisy inona
Nataoko tamin'ny LibreOffice fa niasa tsara ho ahy izany rehefa nampiasaina tamin'ny milina tsy Linux
ary tsy afaka nahazo programa Linux izay nanamora ny asako aho
toy ny amin'ny Windows.
Manome fihaonambe, atrikasa, fandaharam-pianarana aho ary tsy azonao an-tsaina akory hoe ohatrinona no vidiko rehefa
ny rakitra nataoko dia natao pirinty na napetraka tamin'ny milina tsy Linux ho an'ny sasany
fampisehoana, nahafinaritra ahy ny niaraka tamin'i Kubuntu, (fa raha tsy miasa aho dia tsy ho tafavoaka velona),
avy eo hametrahana W7 ...; ka avelao fisarahana hizaha toetra Chakra fa
hitako izao (ary hitako amin'ny distro maromaro) fa tsy hitan'ny mpitety tranonkala izany
miasa tsara miaraka amin'ny kernel ambonin'ny 3.5.7.2
Ny rafitra iray dia miasa tsara afa-tsy ny Opera amin'ny tranga Chakra, nanomboka
Na dia manokatra sy mampiseho ahy ireo pejy aza ny mpitety tranonkala, dia tsy mivezivezy eo anelanelan'ny zana-tsipika ambany izy,
Mihodina hatrany ary miteny amiko hoe: Tsy afaka mifandray amin'ny mpizara.
Opera Sync no ampiasaiko ary tsy mampifandray ahy izy io, milaza hatrany fa ny mpizara
tsy mamaly, fa raha miverina amin'ny kernel ambanin'ny 3.5.7.2 aho dia miasa
Inona no azoko atao ka ny Chakra-Benz izay entin'ny kernel 3.7.6.2 hanitsy izany
Tsy mahomby aho ary afaka mahita ireo mailako sy pejiko?
NAOTY: Tsy maintsy nanokatra Windows aho hametrahana ny hevitra satria tsy i Rekonq
mamela (mamafa azy) ary Opera mandatsaka an'ity ERROR ity: Nanandrana niditra tamin'ny adiresy izy
https://blog.desdelinux.net/wp-comments-post.php, izay tsy misy ao amin'ny
ny fotoana. Azafady mba alao antoka fa marina ny adiresy tranonkala (URL)
voasoratra, ary avy eo andramo avereno ny pejy.
Tsy tonga amiko izany raha mampiasa kernel avo kokoa noho ny 3.5.7.2 aho na inona na inona fizarana, ny fitaovana dia Samsung RV408 misy RAM 6GB ary tsy misy rindrina napetraka.
Salama daholo izay namaky sy naneho hevitra momba an'ity lahatsoratra ity, manana fanambarana holazaina aho: IDIOT aho.
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanomboka ny fizarana fizarana amin'ny andalana Arch Linux aho (ilay distro izay tiako indrindra tokony ho 5 taona lasa izay ary nampiasaina vao tsy ela akory izay) mba hanatanterahana ny fifindran'ireo solosainako manokana.
Arch dia nanome ahy be dia be tamin'ny fotoana nampiasako azy, fa ny fiovana vitsivitsy tato ho ato dia midika fa na dia tsy nandao ny tontolon'ny fitantanana ny rafitra aza aho dia manana asa hafa tokony hatokana ho ahy.
Amin'izany toe-javatra izany ary na dia araka ny nolazaiko aza dia hotohizako ny hikirakira ireo mpizara ahy ary hiditra amin'ireo rafitra misy ahy anio dia tsy manam-potoana ilaina intsony aho hanokana ny fivorian'ny artista izay nizara ahy toy ny taloha.
Ankehitriny, ny fifindra-monina amin'ny fizarana izay mifanaraka amin'ny toetra izay tsipihiko etsy ambany dia tsy zavatra tsy misy dikany, farafaharatsiny ho an'ny olona iray izay nandray anjara lalina tamin'ny fitantanana ny rafitra sy ny fotodrafitrasa IT amin'ny ankapobeny, mainka fa ny fahafantarana ny paradisa GNU maro. + Linux ary nahita zavatra mahatalanjona toy ny Arch Linux ihany.
Raha ny tena izy dia nitady nifindra monina aho tamin'ny fizarana OOTB niaraka tamin'ny fanohanana tsara ny peripheral, famotsoran-keloka, raha azo atao miorina amin'ny KDE SC (na dia tsy tena ilaina aza izany satria afaka manampy ny rindranasa ilainao foana aho, raha tena ilainao izany: tonga ny digiKam ao an-tsaiko), na dia OOTB aza, dia tsy nametraka izay rehetra nilaina tamin'ny fiainana 1000 akory izy io, fa izany no ho mainstream raha azo atao, izay hanatsotra ny fikarohana vahaolana amin'ny olana ary hahafahako mahita ireo rindrambaiko mety ilaiko. fa, farany, tsy Leviatana izy io ary ao anatin'ny OOTB azy dia maivana, malefaka ary haingana araka izay azo atao. Ary mazava ho azy fa handeha tsara amin'ny HW an'ny solosainako izy ary raha azo atao amin'ny solosaina tsy mpizara hafa.
Raha fintinina dia mila fizarana misy ireto toetra ireto aho:
1. OOTB (Ao anaty boaty)
2. Famotsorana Rolling: amin'ny 2013 dia tsy misy dikany ny fampiasana fitsinjarana GNU + Linux amin'ny karazany hafa, na ho an'ny birao / solosaina finday / toeram-piasana sy serivisy. Ao amin'ny sehatry ny solosaina finday / solosaina finday dia hadalana ny miandry 6 na volana maromaro mandra-pivoarana tampoka ny fizarana ary ahafahantsika miditra amin'ireo kinova vaovao ampiasaintsika isan'andro rehefa afaka manavao amin'ny ambiny fizarana sy sehatra izahay. hoy ny fampiharana tsy misy olana. Eo amin'ny sehatry ny lohamilina, tena ilaina ny manana ny fahafahany mampiasa teknolojia vaovao sy manavao ireo efa misy mba hidirana amin'ireo endri-javatra vaovao, fa tsy ny patch patch fotsiny.
3. Manaraka izany, farafaharatsiny amin'ny ampahany tsara, miaraka amin'ireo fitsipika voalaza ao
4. Miovaova, haingana, maivana, raha azo atao miaraka amina fifantohana amin'ny sysadmins na poweusers farafaharatsiny, mamela ny fidirana akaiky amin'ny rafitra amin'ny fomba madio nefa tsy mampiasa fitaovana automagic.
5. Mazava ho azy fa mandeha tsara amin'ny solosaina findainy izany.
6. Fanohanana tsara ny peripheral.
7. Azo ampiasaina: ny fananana OOTB sy ny fanarahana ny fepetra takiana amin'ny mpampiasa farany dia tsy hanala ny fampiasana ny distro, na amin'ny alàlan'ny "vesatra" maharitra, tsy fisian'ny fitaovana ambany, sns.
8. Mainstream na farafaharatsiny miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina mavitrika sy mahay.
9. Niorina - na farafaharatsiny manana hevitra mitombina izay hitohy hivoatra mandritra ny fotoana fohy ary tsy hanjavona tampoka indray andro any ka mamela ahy indray hanana filàna fizarana vaovao.
10. Tsotra ny fitantanana: araka izay azo atao avy amin'ny toeram-pivarotana PPA izay, na dia afaka manonitra ny tsy fisian'ny distros sasany aza izy ireo hiditra amin'ny rindrambaiko nohavaozina rehefa manavao ny rafitra dia loteria tena izy.
10. Miaraka amin'ny rindrambaiko sy voanio nohavaozina, izay tsy midika velively ny tsy fandriam-pahalemana.
11. Milamina tanteraka, miaraka amina vondron'olona manolo-tena ao ambadika sy manana tahiry miaraka amina rindrambaiko ankehitriny, fa tsy prehistorika.
Androany aho dia afaka milaza am-pifaliana fa rehefa afaka andro maromaro nampiasana Chakra (Benz) dia nahita distro toy izany aho. Simple Chakra dia mahagaga ary tsy lazaina intsony raha mpandefa zana-tsipìka mitady rafitra izay tsy mila miatrika manokana ny antsipiriany isa-minitra.
Ny chakra dia manao * mitovy na tsara kokoa * noho ny Arch + KDE SC. Na dia rafitra haingam-pandeha sy misy tsiranoka aza izy, miaraka amin'ny tombony rehetra an'ny Arch amin'ny lafiny fitantanana tsotra azy, dia misy tombony kely ihany koa fa amin'ny faran'ny andro dia tontolo iray ao aminy:
a) kernel nohamarinina hiara-miasa amin'ny KDE SC - amin'ny Arch na fizarana mitovy amin'izany, ny kernel dia nohamarinina mba hampiasaina amin'ny toe-javatra maro karazana, izay azo antoka fa mahatonga ilay teny hoe "ilay manarona betsaka…" na amin'ny teny anglisy "Jack of all trade, tompon'ny tsy misy '.
b) Ny KDE SC dia nohosorana, namboarina, natambatra ary namboarina hatramin'ny antsipiriany kely indrindra, izay midika fa ohatra - fantatro fa antsipiriany tsy misy dikany - ao amin'ny Dolphin, ny fidirana mifandraika amin'i Nepomuk dia manana ny kisary mifanaraka aminy fa tsy ny kisary mahazatra an'io ao amin'ny Arch Dolphin (mitovy amin'ny Dolphin sy KDE SC) ary mila niatrika manokana aho.
Ny tsy antsipiriany tsy misy dikany dia miaraka amin'ireo fanatsarana vaovao an'i Nepomuk sy ny sisa amin'ireo fotodrafitrasa KDE amin'ity kinova vaovao 4.10 ity, ny tanan'ireo devoly Chakra dia miharihary fa manolotra rafitra maivana, haingana ary miaraka amin'ny rehetra. nafana ny endri-birao - na ny masinako aza mangatsiaka tanteraka aorian'ny fampiasana ny Chakra mandritra ny ora maro misokatra!
c) Koa satria ny Chakra dia fizarana tafiditra, tsy nila nametraka fitaovana acpi, acpid na laptop-mode-fitaovana aho mba hitrandrahana indrindra ny rafitra. Raha ny marina, tamin'ny fametrahana voalohany nataoko ny Chakra ary nampiasaiko hizaha toetra ny haitao sy ny metodôma izay nampihariko tao amin'ny Arch Linux, dia tsapako fa na dia ao amin'ny Arch-sy ny rafitra maro hafa aza- ilaina ny mampihatra azy ireo ao Chakra fa tsy hoe be loatra izy ireo fa mifanohitra amin'ny vokatra. . Ny chakra dia fizarana izay eritreretina ny zava-drehetra ary tsy voavidim-bola izany satria izahay mpampiasa farany dia tsy mankafy afa-tsy ny mankafy ny fampiasana ny masinina.
Na izany na tsy izany, noho ny antony nohazavaiko tetsy ambony dia mbola tsy afaka ny hampiasa Ubuntu na Linux Mint aho (fizarana tsara kokoa ho an'ny KDE), fizarana izay tena tiako na eo aza ny lovan'i Debian: ny andro nanjary famotsoran-keloka Ubuntu dia hanombatombako ny filako amin'izao fotoana izao hifindra monina na tsy mankany amin'io sehatra io mihoatra ny zava-drehetra hampivondrona ny fampiasana ny rafitra satria ny mpizara vaovao dia mihazakazaka ny Ubuntu Server rehetra - mitazona ireo taloha amin'ny Arch aho.
Ubuntu Server dia fizarana ho an'ny mpizara izay sahirana mafy hahazoana toerana fa androany dia tsara dia tsara, ny olana efa elaela lasa izay dia ao aoriantsika ary androany dia betsaka ny azo atolotra.
Izaho koa dia nanandrana ny kinova openSUSE farany, 12.3 RC2 saingy mbola hitako ihany fa na eo aza ny faniriana napetrako dia mbola distro mammoth ho an'ny fitiavako azy ary mifantoka loatra amin'ny fampiasana IT / orinasa matihanina, indrindra ho an'ireo izay mila miatrika. miaraka amin'ny tambajotra mifangaro sy ny milina Windows.
Fedora dia kianja filalaovana haitao vaovao misy fanohanana voafetra eo anelanelan'ny fanontana 18 volana ary manana fihetsika mitovy amin'izany amin'ny lozisialy sy kernels vaovao toa an'i Ubuntu, noho izany dia nihena tanteraka izany.
Mageia: Tsy mbola nampiasa Mandriva mihoatra ny endrika distro hopper indraindray aho ary avy amin'ny zavatra novakiako tao amin'ny tranonkalanao dia azo antoka fa tsy distro ho an'ny olona iray mifantoka amin'ny lalan'ny sysadmin izany.
Ny sasany dia azo antoka ankehitriny fa mieritreritra safidy hafa mivantana amin'ny Arch toy ny Cinnarch, ArchMint, ArchBang na Manjaro ankoatry ny hafa: ny tena izy dia tsy mahafeno ny fepetra takiko izy ireo. ArchBang dia Arch voadinika sy nasiana tweaks saingy mbola mila ny mpampiasa handinika azy io fa tsy distro OOTB ho an'ny mpampiasa farany (izay notadiaviko ny tenako!) Fa distro ho an'ny sysadmins ary ireo mpampiasa herinaratra somary kamo izay te hampiorina ny Arch Linux ary mihazakazaka ao anaty fotoana fohy.
Mbola kely loatra i ArchMint ary mampiasa ny MATE ihany koa - na dia tiako be aza ny GNOME2 androany, dia tsy azo iadian-kevitra ity karazana birao 'retro' ity.
Tiako ny Cinnarch na dia misy antsipiriany sasany aza mampiseho fa mbola mila asa kely izy io - tsy matotra, raha ny tena izy dia lasa Mpampiasa Matoky ny Arch Linux fotoana fohy lasa izay izay tena tsara.
Ny Manjaro Linux Cinnamon dia voaporofo fa nanana fahombiazana miavaka ary raha ny marina dia napetraka amin'ny iray amin'ireo masiniko aho na dia kely aza ny hoaviny: ho avy i Chakra!
Manjaro Linux dia eo am-pandehanana mankany amin'ny fanapariahana lehibe saingy mazava ho azy, mbola lavitra ny lasa lasa Chakra io. Ho fanampin'izay, ny kinova KDE SC an'ny Manjaro dia vondrom-piarahamonina, ao Chakra ny birao KDE SC no mpandray adala pamp
Tsy mora ny nanapa-kevitra ny amin'ny distro horaisiko amin'ny ho avy raha tsy efa nanapa-kevitra ny hanandrana an'i Benz aho.
Niaiky aho fa ny Chakra dia tsy mba teo amin'ireo distro ankafiziko lavitra azy, fa ny mifanohitra amin'izay no izy: isaky ny manandrana aho dia mahita hadisoana amin'ny installer, traikefa mavesatra ampiasaina, bloatware madio ka nahafinaritra ahy ny gaga rehefa hitako fa tsara izany. Benz dia tao anaty MV ary tsy lazaina intsony rehefa nanapa-kevitra ny hametraka azy amin'ny fizarana taloha aho, fahagagana tena izy.
Raha mpandefa zana-tsipìka ianao ary tianao ny KDE SC ary manonofy Arch ianao namboarina manokana ho an'ny KDE sy ny KDE izay namboarina manokana ary natambatra tamin'ny Arch, raha te hiala amin'ny fitantanan-drakitry ny tsirairay avy amin'ny antsipirian'ny rafitra ianao nefa tsy very fanaraha-maso tsara sy voasarimakirana eo aminy amin'ny fotoana ilàna azy-raha ny zava-misy dia mbola vita avy amin'ny console, tsy misy izany antsoina hoe manager manager fonosana misy sary izany (ankoatry ny fisian'ny maro-front for pacman) izay mahafinaritra fotsiny ary milaza zavatra betsaka avy amin'ireo mpamolavola azy- raha toa ka te hanana ny toetra mampiavaka ny Arch taloha izy ireo amin'ny lafiny maivana, malefaka, haingana, kanto, manitatra ary raha mankasitraka ny hakanton'ny zavakanto koa izy ireo miaraka amina asa teknika tena tsara ka azo inoana fa Chakra tokoa no distro notadiavin'izy ireo.
Tsy te-hanidy ity fanehoan-kevitra ity aho raha tsy manonona manokana ny * fananana * izay omen'i Chakra mikasika ireo fizarana hafa amin'ny lafiny fizarana zavakanto: mahafinaritra ny fizarana na aiza na aiza no jerenao. Raha ny ahy dia aleoko lohahevitra mazava ka mampiasa Dharma miaraka amina fanovana vitsivitsy aho: OS ambaratonga (windows, QtCurve widget set and loko), Shere Khan ho an'ny cursor mouse ao X (seranan-tsoratr'ilay totozy MacOS misy baoritra amoron-dranomasina sy ny zavatra rehetra) ary Helium ho an'ny Plasma. Ny grafikan'i Chakra dia tsara tarehy tsotra ary manampy amin'ny fanomezana aura manokana ho an'ny distro ary tsy dia toa izany fotsiny, fizarana GNU + Linux (tsy milaza izany aho amin'ny fomba maivana, nandritra ny androm-piainako dia nampiasa ny booty sary aho tamin'ny Arch ary nanomboka ny session X-ko. avy amin'ny tsipika baiko) fa ny rafitra fandidiana izay manakaiky ny MacOS na Windows eo amin'ny lafiny fampidirana azy nefa miaraka amin'ireo toetra tsara rehetra izay GNU + Linux ihany no afaka manome.
Farany: mora be ny mandika ny teny Chakra rehefa tsy ampiasaina (manana aho) fa zava-dehibe ny mazava fa ny Chakra dia distro natao ho an'ireo mpampiasa herinaratra sy ireo mpitantana ny rafitra 'misotro ronono' izay maniry rafitra matanjaka sy maoderina, mahery, haingana, malefaka ary mailaka izay ahombiazan'ny zavatra rehetra araka ny noheverina.
Porofon'izany ny any Chakra, tsy toy ny amin'ny sisa (saika) ny distros rehetra izay mampiasa systemd dia nanapa-kevitra ny hampiasa ny rafitra fanoratana anarana vaovao an'ny interface network hatramin'ny voalohany izy ireo fa tsy hanohy ny hisaron-tava azy ireo - ohatra ny motherboard-ko tsy et0 intsony ny tamba-jotra fa enp3s0 araky ny fifanarahana vaovao fanonona anarana ny interface interface.
Na eo aza ny zava-misy fa ny KDE 4.10 dia nanao ny fanovana ny udisks2 ao Chakra dia mitazona ny fampiasana udisks izy ireo noho ny fihemorana sy ny fampisehoana ambany izay asehon'ny udisks2.
Ireo antsipiriany rehetra ireo dia manampy amin'ny fampisehoana fa ao ambadiky ny Chakra dia misy ekipa iray manana fahaiza-misaina betsaka, izay mieritreritra tsara alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra tsirairay ary tena ho hitanao ny fitiavana napetrak'izy ireo tao anaty disco momba ny fomba fiasan'izy io.
Raha mahita ny fametrahana ny KDE SC 4.10 miaraka amin'ny kernel 3.7.6 feno loatra aho dia miahiahy fa miatrika rafitra Arch Linux na Gentoo aho noho ny fahamailaka sy fiasan'ny asa rehetra.
Mbola mila maneho hevitra momba ny rafitry ny boaty ampiasain'izy ireo ho an'ny fampiasa fampiharana tsy Qt sy ny maro amin'ireo toetran'ny Chakra aho, fa ny hevitro rehefa nanomboka nanoratra aho dia ny hanao hevitra fa tsy lahatsoratra iray manontolo 😛
Mahafinaritra ny andohalambo fa ao Chakra dia manana ny Arch + KDE azoko atao raha manam-potoana hanokanana ny tenako ho amin'izany aho. Ary satria be dia be ny olona mampiseho fa fantany izay ataony, maninona no lany andro mamerina mamorona ny kodiarana? Chakra Benz dia vatosoa kely ekena.
Miarahaba ary mandrosoa ary andramo i Chakra: mety malahelo kely ny 'fahaveloman'ny' Arch ianao ary ny sasany amin'ireo fonosana efa voaangona na AUR (toy ny vcp) sy ireo fitaovana natokana ho an'ny sysadmins fa hahazo rafitra fiasa mahatalanjona hanampy ny rindrambaiko ao ianao tsy misy dikany ny tadiavin'izy ireo, betsaka kokoa raha avy amin'ny fampiasana Arch izy ireo.
Ity fanehoan-kevitra heveriko fa ity dia ho an'ny lohahevitra vaovao. Na izany na tsy izany, milaza aminay amin'ny ankapobeny ianao fa nijaly tamim-pientanam-po ianao nitady distro toy ny Arch izay tonga lafatra sy azo antoka ary Out the Box.
Manohana roa taona i Fedora? Manome iray monja, nanontaniako teo amin'ny fiarahamonina aho, novakiako tao amin'ny wikipedia ... Ny antontan-taratasy dia milaza fa ny famoahana teo aloha dia hatramin'ny volana voalohany amin'ny iray monja izao.
Aza milaza amiko fa tsy misy dikany izany, raha miaraka amin'i Debian ny sasany .debs dia tsy mahafeno ny fiankinan-doha, fa hatreto aho dia tena mahay manao compilation.
LibreOffice 4.0 sy ny herin'ny marika (fahamarinana miafina eo amin'ny OpenOffice sy LibreOffice)
Debian 7 Inona no vaovao taloha?